संगीत नृत्य र अभियनयको क्षेत्रमा जम्दै सुमन – Nepal Parikrama
संगीत नृत्य र अभियनयको क्षेत्रमा जम्दै सुमन
कपिलबस्तु–साउन । गीत संगीत भनेको त्यस्तो साथी हो । जस्ले मानव जातीलाई दुख र पीडामा मल्हम बनेर साथ दिएको हुन्छ, भने खुशीको माहोलमा हासो बनेरसंगै रहेको हुन्छ । गीत संगीतको कुरा गर्ने वितिकै आनन्द अनुभूती हुने गर्दछ । गीत संगीत कस्लाई मन पर्दैन ? यो जिज्ञासाको विषय पनि हो । समय र उमेर अनुसार फरक किसिमका भाव भएका गीत मन पर्नु स्वभाविक नै हो । तर मन नै पर्दैन भन्ने ब्यक्ति विरलै भेटिएला । यो शताब्दिको संघारमा गीत संगीतको ठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ । गीतसँगै अहिले गीतको भियियो पनि निकै महत्वपूर्ण मानिदै आएको छ । अहिले गीत राम्रो भएर मात्र गीत सफल हुन सक्दैन त्यसमा नृत्य र अभियनको पनि ठूलो स्थान छ ।
अहिलेको समयमा नृत्य र अभिनयबाट निकै चर्चा बटुलिरहेका लोकप्रिय कलाकार सुमन पौडेल भावि पुस्ताको र भर्खर यो क्षेत्रमा आउन चाहनेहरुका लागी एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल भएका छन् । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका ५ मा वि.स. २०४९ चैत्र ९ गते पिता इश्वरी पौडेल माता सावित्री पौडेलको कोखबाट जन्मिएका सुमन आºनो जन्म क्षेत्रलाइ नै कर्मक्षेत्र बनाएर अघि बढ्ने सोचमा रहेका छन् । नृत्य र अभिनयको क्षेत्रमा निकै नै अग्रसर र त्यति नै ब्यस्त रहेका सुमन विगत ४ वर्षदेखी छमछमी कला केन्द्रको प्रमुख भएर जिम्मेवारी समालिरहेका हुनाले पनि यो नाम त्यति नौलो भने होइन । पहिलो पटक अभिनय गरेको आमा तिम्रो पाउमा शिर बोलको गित बाट नै सबैको मन जित्न सफल उनले बजाइदेउन मादल, लाको पिरती, फुरफुर गर्दै , लगाएत एक दर्जन भन्दा बढी गीतहरुमा नृत्य गरिसकेका छन् ।
अषाढ महिना लागे संगै तीज गीतहरुमा ब्यस्त रहने उन्ले अषाढ र श्रावण यो दुई महिनामा आफूलाइ समय ब्यवश्थापन गर्न निकै कठिन भएको बताउँछन् । धेरै गीतहरुमा नृत्य मात्र नभएर आफैले निर्देशन समेत गरेका छन् । हरेक प्रकारका नृत्यमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्षम रहेकाले पनी उनको नृत्यबाट नै गीतको सम्पूर्ण भाव स्पष्ट देख्न सकिन्छ । आर्कषक ब्यत्तित्व उत्कृष्ट नृत्य र सरल स्वभावका कारण पनि उनका ºयानहरु बढ्दै गएका छन् । उसो त राजधानी मै रहेर काम गर्ने अवसर पनि नआएका होइनन् । तर आफू जन्मिएकै क्षेत्रमा रहेर काम गर्न चाहने उनले संगित क्षेत्रमा राजधानीबाट जस्तो स्तरका कामहरु गरिन्छ त्यो जिल्लाबाटै गर्न सक्ने दावि समेत गर्छन् ।
Published On: २५ श्रावण २०७३, मंगलवार १५:२३